रबि लामिछाने र दिपक बोहोरा सहित असहाय बुबा आमाहरुलाई खानाको प्रबन्ध गर्दै:: Naya Nepal
रबि लामिछाने र दिपक बोहोरा सहित असहाय बुबा आमाहरुलाई खानाको प्रबन्ध गर्दै
आज शनिबारको दिनमा रवि लामिछाने लगायतले नवजीवन परोपकार समाजमा रहेका असहाय बुबा आमाहरुलाई खाना खुवाउने कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो।
दिपक बोहराले आफ्नो फेसबुकमा फोटो सेयर गर्दै आज शनिबारको दिन, मन प्रसन्न रहेको लेखेका छन् ्। अनि आफुले यस्तो राम्रो काम गर्न छुटेकोमा आफुलाई गुनासो गरेका छन्। फेसबुकमा यसरी लेखेका छन् हेर्नुहोस।
आज शनिबारको दिन, मन प्रसन्न छ। नवजीवन परोपकार समाजमा रहनु भएका असहाय बा आमाहरुलाई आजको खानाको प्रबन्ध Rabi Lamichhane र Nekita Poudel ले आफ्नो तर्फ बाट गर्नु भयो। यस्तो राम्रो काममा म किन छुट्थे र। खुशी दिन र हुन धेरै के गर्नु पर्छ र! सानो प्रयास, ठूलो खुसी! HAPPY SATURDAY
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपा सत्ता के सत्याग्रही गोविन्द केसीको प्राण लिन चाहन्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूलाई कम्युनिष्ट, समाजवादी, दुःखी–गरी जनताको त्राणहर्ता, विकासवादी, भ्रष्टाचारविरुद्धका मसीहा, प्रजातन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताका हिमायती हूँ भनेर पटक पटक भन्छन् । उनी कति कम्युनिष्ट छन्, उनका आनीबानी कति समाजवादी छ, कतिसम्म गरीब दीनदुःखीका पक्षमा उभिन्छन्, कतिसम्म सदाचारी छन्, शासन व्यवस्था कतिसम्म पारदर्शी चलाउँछन्, नागरिक स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र देखाउने दाँत हो वा असलियत यो सबै इतिहासले कुनै दिन मूल्यांकन गर्ला । यसबारेमा कुनै अर्को सन्दर्भमा पनि केलाउन सकिन्छ । केलाउँला ।
तर बेइमान सत्ता सँधै नागरिक झुक्याएर शक्ति हत्याउँछ । बिचौलिया, दलाल, तस्कर, माफिया, ठेकेदार, भ्रष्ट कर्मचारीको वरिपरी घुमेर उनै केसीसँग गरेका सम्झौताका पुलिन्दालाई रछ्यानमा फाल्ने दुस्साहस गर्न थाल्छ । डा. केसी पनि उत्तिकै ज्याद्रो छन् । सरकार जति झुक्याउन उद्यत छ, उनी त्योभन्दा कठोर । निहत्था नागरिकको घाँटी रेटेर, घरजग्गा कब्जा गरेर, सम्पत्ति लूटेर, अपहरण र वेपत्ता बनाएर, गरीबी र दुःखलाई क्रान्तिकारी नारामा भजाएर शक्तिमा पुगेकाहरुसँग लड्न डा. केसीसँगका अस्त्र हुन्, सत्य, विवेक, इमान र नैतिक मूल्य । अर्थात् अरुलाई दुःख दिएर, सताएर, हत्या गरेर, लूटेर सत्ता र शक्ति आर्जन गरेका दूष्टहरुसँग लड्न डा. केसीेले आफैलाई यातना दिन्छन्, कठोर दुःखको भुँग्रोमा हाल्छन् । अनि आफ्नै प्राण दाउमा राखेर दुनीञाको हितका लागि सत्याग्रहमा होमिन्छन् ।
तर आज उठाउन खोजेको विषयचाहिँ उनले हूँकार दिने गरेको सदाचार र भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था र उनका कार्यशैली, नीति र व्यवहार हो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली कति मानवीय देखिए भन्ने अर्को प्रसंग हो । जोड्न खोजेको सन्दर्भचाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रह हो ।
डाक्टर गोविन्द केसी आफ्नो जीवनको १९ औं सत्याग्रहमा छन् । आम जनताले सर्वसुलभ चिकित्सा सेवा र शिक्षा पाउनु पर्दछ भन्ने उनको एक मात्रै माग र मिशन छ । पटक पटक निर्लज्ज सत्तासँग जीवन दाउमा राखेर उनले नागरिकको हितका लागि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निकै गुणकारी परिवर्तन ल्याएका छन् । यो मूलतः डाक्टर केसीको पागलपनले दिएको फल हो । जुन फल टिपेर आज देशभरका मानिसहरु खाइरहेका छन् । जो फल खाइरहेका छन्, ती स्वयं पनि डा. केसीप्रति कृतज्ञ देखिएनन् । कृतघ्न त्यो जमातसँग पनि उत्तिकै घृणा र रोष छ । तर मूल रुपमा प्रश्न सोध्ने त फेरि राज्यसत्तासँगै हो ।
एउटा फकीर वरिष्ठ चिकित्सक करिब करिब मृत्युशैयामा पुगेको छ । जो देश र जनताको सेवामा मल्हमपट्टी लगाउँदा लगाउँदै सरकारी सेवाबाटै निवृत्त भएको हो । सरकारी सेवामा रहेकै बेला गरेका दर्जनौं आमरण अनशनको प्रतिफल मुलुकको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अनेकन परिवर्तन आएको छ । त्यही निर्मम र निर्लज्ज सत्ता जो पटक पटक डा. केसीलाई मृत्युशैयामा पुर्‍याएर, गलाएर सम्झौता गर्दथ्यो । डा. केसीले उठाएका मागमा सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने ढँटुवा सत्तासँग उनले फेरि उही कठोर बाटो समात्नु पर्दथ्यो । यसरी यो लहरो तानिएको वर्षौ भइसक्यो । १९ औं सत्याग्रहसम्म आइपुग्दा डा. केसीले त्यही माग उठाइरहेका छन्, जुन पहिलो पटकदेखि सत्ताले बारम्बार सम्झौता गर्दै आएको छ ।
सिंहदरबारको सत्ता बालुवाटारको चौघेरोबाट चलाइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई किञ्चित पनि लज्जा छैन । सत्ताको सयलमा रहेर न्यायिक दृष्टि गुमाइसकेका उनी, देशको सेवा गर्दागर्दै बाँकी रहेको एक मुठी प्राणवायु निचोरिन लागेका डा. केसीबारे किन मौन छन् ? के उनको कर्तव्य छैन, देश र जनतालाई जवाफ दिने ? डा. केसीका कुन कुन माग नाजायज हुन्, कुन माग पूरा गर्न नसकिने हो ? सकिन्न भने सकिँदैनसम्म पनि भन्ने हिम्मत जुटाउन उनी किन सकिरहेका छैनन् ?, किन सुतुरमुर्गले टाउको लुकाएझै लुकाएर बसिरहेका छन् ?
डा. केसीसँग सबैजसो सरकारले सम्झौता गर्‍यो र बेइमानी पनि उही रीतले गरियो । कांग्रेस एमाले, माआवादी नेतृत्वका सरकार हुन् वा ती समयमा रहेका अनेकन पार्टीका स्वास्थ्य/शिक्षा मन्त्री सबैबाट केसीले धोखाधडी मात्रै पाइरहेका छन् । ओली आफै प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएका सम्झौता कतिपटक तोडमरोड गरिए ? त्यसको पछाडीको कारण के थियो ? बालुवाटारमै बोलाएर डा. केसीलाई फुर्क्याई फुर्क्याई सम्झौता गर्दा बोलेका कुरा के दुनीञाले बिर्सिसके भन्ने ठानेको ?
हिजो त्यसरी मानिस उचाल्न सक्नेले आफैले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन फेरि कुन तत्वले छेक्यो ? सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । देशको सबै कुनामा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच पुर्‍याउनु पर्दछ भन्ने डा. केसीको अभियान कत्तिको देव वाक्य रहेछ भन्ने त कोभिड–१९ले सृजना गरेको संकटले देखाएन र ? अझ पनि यो हठ किन ? के का लागि ?आफूलाई समाजवादी सत्ताका मतियार दावा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले उठाउनुपर्ने माग डा. केसीले बोकिरहेका छन् ? अनि उनले भनेको कुरा पूरा गर्दा कुनचाहिँ बिचौलियाको मन मर्ने भयो ? कुनचाहिँ ठेकेदारको स्वार्थमा ठेस लाग्ने भयो ? कुनचाहिँ भ्रष्ट कर्मचारीको मिशनमा मेल खाएन ? कुन तस्कर र माफियाको मिलेमतोमा गरिएका साँठगाँठहरु तोडिने भए ? होइन भने के प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार गोविन्द केसीलाई मार्न नै चाहन्छ ? के डा. केसीलाई पनि अर्का सत्याग्रही नन्दप्रसाद अधिकारीकै नियती भोगाउन बाध्य पार्न खोज्दैछ, समाजवादी सत्ता ? जवाफ चाहियो प्रधानमन्त्री ओलीज्यू, त्यो पनि बन्द कोठाबाट एकोहोरो पुराण पाठ गरे जस्तो होइन, जनतासँग आमने सामने सवाल जवाफ गरेर ।